बाबुरामको आवाजमा दुरुस्तै गित र सम्बोधन गर्ने हास्य कलाकार भिडियो सहित !! - Gaule Media ::
Home/मनोरञ्जन/बाबुरामको आवाजमा दुरुस्तै गित र सम्बोधन गर्ने हास्य कलाकार भिडियो सहित !!
ramsharan१७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १५:१७
सुदिप गौतम बुटवल कार्तिक १५
कुनै सफल ब्यक्तिका पछाडी कसैन कसैको हात अवस्य पनि हुन्छ तव मात्र उ सफल हुन सक्छ ।
नेपाली हास्य कलाकारिताको इतिहास हेर्ने हो भने पनि धैरैको जोडी लामो समय सम्म टिक्न सकेको छैन् । कति जोडि सामान्य चर्चा पाउना साथ छुटिन्छन् ।
नेपाली हास्यक्षेत्रमा केही जोडिमात्र यस्ता छन जुन लामो समय सम्म टिकेको छ। पछिल्लो समयमा टि वि जोडीले पनि सँगै सहयात्रा सुरु गरेका छन् । टिकाराम भुषाल र विशाल थापाले आफुलाई टि वि जोडिका रुपमा स्थापित गराउन खोजि रहरेका छन् ।उनीहरुले पहिलो प्रहसन नवलपरासी को एउटा कलेजको सास्कृतिक कार्यक्रमबाट सुरुवात गरेका थिए। भने अहिले उनिहरुले १०० वटा भन्दा बढि कार्यक्रम हरु सङै गरिसकेका छ्न।
टि विको प्रहसन मेला महोत्सवमा खुबै लोकपृय बन्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा मधेसी र पाहाडि जनताको बढ्दो दुरिको बारेमा अत्यन्तै शन्देस मुलक प्रस्तुति लोकपृय मानिदै आएको छ। जस अनुसार टिकाराम मधेसी लबजमा प्रस्तुत हुन्छ्न् भने विशाल भने पाहाडि हाउभाउमा।
यसैक्रममा विशाल थापाले उल्टो नमस्कार गर्ने मुख बाट संख बजाउने, सहनाई बजाउने गर्दछन। र बिभिन्न कलाकार हरुको आवाज समेत निकाल्ने गर्दछन।
आज हामी संग हुनुहुन्छ फरक फरक आवाज निकाल्न सक्ने संगै हास्य कलाकार र Melody singar “भुसाल मित्रमन” संगै “विशाल थापा जी” TB जोडि प्रत्यक्ष आज रेडियो समाबेसी संगै स्कटनेपाल डट कममा संगीतमय रमाइलो भलाकुसारी गर्नको लागि बुटवल रेडियो समाबेसी र बुद्धटेलिभिजन कि प्रस्तोता प्रेरणा के.सी जी को साथ मा नमस्ते बुटवल कार्यक्रम अग्रज लाई सम्मान अनुज लाई प्रोत्साहन जय गीत जय संगीत !!